You are here: Home Products Acnes
Vitamin C သည် ရေ တွင် လွယ် ကူ စွာ ပျော် ၀င် လွယ် ပြီး အရေ ပြား တွင်း သို့ လျင် မြန် စွာ ထိုး ဖောက် ၀င် ရောက် နိုင် ခြင်း မ ၇ှိ ပေ။ အ ပေါ် ယံ မျက် နှာ ပြင် တွင် သာ ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်း ရှိပါသည်။ Vitamin C သည် ဓါတ်လျော့လွယ် သောအာ နိ သင်ရှိသည်။ သို့သော် Rohto Mentholatum မှ အဆင့်မြင့်နည်းပညာ ဖြင့် တီထွင်ထုတ်လုပ် ထား သော C 10 တွင် Vitamin C ကို ၁၀%အထိ Stable ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ဖော်စပ်ထားပြီး epidermis အလွှာထိ လျင်မြန်စွာ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်သောအာနိသင် ရှိခြင်းကြောင့် အမဲစက် အမာရွတ်များကို ထိရောက်စွာ ကာကွယ်ကု သပေးနိုင် သည်။ Acnes C10 တွင်ပါဝင်သော Vitamin C ၏ အာနိသင်များမှာ Melanin များကိုတားဆီး ပေးခြင်း၊ Collagen Fiber များကို အားဖြည့်ထောက်ခံ ပေးထားခြင်း၊ သွေးလည့်ပတ်မှူကောင်းစေခြင်း၊ အဆီထွက်နှုန်း များကို မျှတစွာထိန်းညှိပေးခြင်းများ ဖြစ်ပါသည်။
အမာရွတ်နှင့်တင်းတိပ်မှဲ့ခြောက်များကို တစ်ဖြေးဖြေးချင်းမှေးမှိန်ပျောက်ကွယ်သွားစေပါသည်။ အရေပြားချောမွေ့ နူးညံ့မှု ကိုရှိစေပါသည်။ အဆီနှင့်တာရှည်ခံစေသောဓါတုဆေးဝါးများ မပါသောကြောင့်အရေပြားပျက်စီးစေ ခြင်းမရှိပဲယုံကြည် စိတ်ချစွာ သုံး စွဲနိုင်ပါသည်။
မှတ်ချက်- ၀က်ခြံမြောက်များစွာ ပေါက်နေသောသူ နှင့်ပျက်စီးနေသောအရေပြား၊ ပွန်းပဲ့ရှနာနှင့် sensitive skin များလိမ်းရန်မသင့်တော်ပါ။
လိမ်းနေစဉ်တွင်လည်း မျက်နှာပြင်ပေါ်သို့အကောင်လေးများပြေးလွားသကဲ့ သို့ခံစားရပါမည်။ စိုးရိမ်ရန်မလိုပါ။ အရေ ပြား တွင်းသို့ လျှင်မြန်စွာထိုးဖောက် ၀င်ရောက်ပြီး Treatment ပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ပါဝင်သောပစ္စည်းများ-Ethoxydiglycol, Propylene Glycol, Water, l-Ascorbic Acid, Grapefruit extract, Fragrance.
အသုံးပြုပုံ- တစ်စက်မှ နှစ်စက်ထိလိုသလောက်ညှစ်ယူပြီး လက်ချောင်းများဖြင့် အရေပြားတွင်းသို့ စိမ့်ဝင်နိုင်အောင် အ သာယာ နှိပ်နယ်လ်ိမ်းပေးနိုင်ပါသည်။ တစ်နေ့လျှင် နှစ်ကြိမ်လိမ်းနိုင်ပါသည်။
Acnes Vitamin Cleanser တွင် အသားအရေအတွက် လိုအပ်သောဗီတာမင်တို့ဖြင့်ပေါင်းစပ်ပါဝင်ထားသည်။ အညစ်အကြေးနှင့် ဗက်
တီးရီးယားကို သန့်စင်ရုံသာမက ဝက်ခြံပြန်မဖြစ်အောင် တားဆီးပေးခြင်း၊ ကျန်းမာသောအသားအရေဖြစ်အောင်ထိန်းသိမ်းနိုင်စွမ်း
ရှိပြီး အမာရွတ်များကို တဖြည်းဖြည်းမှေးမှိန်စေပါသည်။ ဆဲလ်သေများကို ဖယ်ရှားပေးပြီး အသားအရေမဲညစ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေး
သည်။ အိုမင်းရင့်ရော်မှုကို ကာကွယ်ပေးပြီး၊ တင်းတိပ်မှဲ့ခြောက်များကို လျော့ချပေးသောကြောင့် အသားအရေကို ဖြူစင်ဝင်းပစေ
သည်။ မျက်နှာအသားအရေကို တင်းရင်းချောမွေ့စေသည်။ ဆဲလ်များကို အားဖြည့်ပေးခြင်း၊ ချွေးပေါက်များကို ကျဉ်းစေခြင်းတို့အ
ပြင် အသားအရေကိုချောမွေ့ နူးညံ့စေပါသည်။
Water, Stearic Acid, Gylcerin, Butylene Glycol, Myristic Acid, Palmitic Acid, Potassium Hydroxide, Cocamidopropyl-
အမြှုပ်ကိုလက်ဖဝါးအတွင်းထည့်၍ ၃၀ စက္ကန့်မှ တစ်မိနစ်အတွင်း နှိပ်နယ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ရေများများဖြင့်ဆေးချပါ။
အမြှုပ်ပုံစံဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော မျက်နှာသစ်ဆပ်ပြာဖြစ်သည်။နေ့စဉ်သုံးရန်အထူးသင့်လျှော်ပြီး အချိန်ကုန် သက်သာစေပါသည်။ ပါးလွှာသောအရေပြားနှင့် ယားယံသော အသားရေများအတွက် အထူးသင့်လျော်ပြီး နူးညံ့မှူကိုရရှိစေပါသည်။ Isopropylmethylphenol ပါဝင်သော ကြောင့် ၀က်ခြံဖြစ်စေသော ဘက်တီးရီး ယားပိုးများကို ချွေးပေါက် အတွင်းပိုင်း အထိ ဖယ်ရှားသန့်စင် ပေး ပါသည်။ Dipotassium Glycyrr -hizinate ပါဝင်သောကြောင့် ၀က်ခြံကြောင့်မျက်နှာ ရောင်ယမ်းခြင်းများးကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။ အဆီ ပြန်သော အ သားရေများနှင့် ၀က်ခြံမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ချင်သူများ အတွက် အထူးသင့်လျော်ပါသည်။ ၀က်ခြံနှင့်အဆီ ပြန် ခြင်းကိုအထူးကာကွယ် ပေးသော မျက်နှာသစ်ဖြစ်ပါသည်။
ပါဝင်သောပစ္စည်းများ- Water, Cocamidopropyl Betaine, Sodium N-Lauroyl-N-Methyl-β-Aminopropionate, Ethanol, Lauric Acid, Potassium Hydrooxide, Myristic Acid, Polysorbate 60, Palmitic Acid, Octyldodecanol, Isopropylmethylphenol, Dipotassium Glycyrrhizinate, Disodium EDTA, Fragrance, Propylparaben, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Magnesium Ascorbyl Phosphate, Sodium Hyaluronate, Sodium Acetylated Hyaluronate.
အသုံးပြုပုံ- Acnes foaming wash လိုသလောက်ညှစ်ယူပါ။ မျက်နှာပြင်ပေါ်သို့ စက္ကန့် ၃၀ မှ တစ်မိနစ်အထိ ညင် သာစွာ နှိပ်နယ် ရပါမည်။ ပြီးလျှင်ရေများများ ဖြင့်ဆေးကြောသန့်စင်ရပါမည်။ နေု့စဉ် နံနက်တစ်ကြိမ် ညနေတစ်ကြိမ် သုံးစွဲနိုင် ပါ သည်။
Acnes Pure White Cream မျက်နှာလိမ်းခရင်း(မ်)သည် အသားအရေကို ရေဓာတ်ဖြည့်ပေးပြီး စိုပြေစေပါသည်။ အရေပြားဆဲလ်
သစ်များကောင်းမွန်စေရန် အထူးစီမံထုတ်လုပ်ထားပါသည်။ ဝက်ခြံဖြစ်ခြင်းကိုလည်း ကာကွယ်ပေးပြီး အသားအရေ ဖြူစင်ဝင်းပစေ
ပါသည်။ Acnes Pure White Cream တွင်ပါဝင်သော သဘာဝ အသီးအနှံများမှ ထုတ်လုပ်ထားသည့် AHAs သည်အရေပြားအ
ပေါ်ယံလွှာရှိ ဆဲလ်သေများကို ပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ Yogurt Extract (သဘာဝဒိန်ချဉ်)သည် အရေပြားအောက်ဆုံးလွှာအ
ထိအားဖြည့်ပေးသည်။ အဆီပြန်ခြင်းကိုထိန်းပေးပြီး ဝက်ခြံဖြစ်စေသော ဗက်တီးရီးယားများကိုသေစေပြီး အသားအရေညိုညစ်စေ
သော Melanin ဓါတ်များကို ဖယ်ရှားပေးပြီး အသားအရေဖြူဝင်းစေသော ဗီတာမင်များစွာလည်းပါဝင်ပါသည်။
Water, Dipropylene Glycol, Caprylic/Capric Triglyceride, Niacinamide, Potassium Lactate, Polyacrylate Cross-
polymer-6, Arachidyl Alcohol, Lactic Acid, Behenyl Alcohol,Triethanolamine, Phenoxyethanol, Pullulan, Xanthan
Gum, Arachidyl Glucoside, Salicylic Acid, Tocopheryl Acetate, Propanediol, Disodium EDTA, Dipotassium
Glycyrrhizate, Fragrance, Methylisothiazolinone, Isopropylmethylphenol,Yogurt Filtrate, Butylene Glycol, Propylene
Glycol, Prunus Persica (Peach) Leaf Extract, Rubus Idaeus (Raspberry)Fruit Extract, Pyrus Malus (Apple) Fruit
Extract, Ascorbic Acid, Ascorbyl Glucoside.
မျက်နှာကိုစင်အောင်သစ်ပါ။ လက်ဖဝါးထဲသို့ Acnes Pure White Cream ကို အနည်းငယ်ထည့်ကာမျက်နှာပေါ်သို့ ညီညာစွာပွတ်
လိမ်းပေးပြီး ညင်သာစွာနှိပ်နယ်ပေးပါ။ နေ့ရောညပါ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ (Acnes Pure White Wash နှင့်တွဲ၍ အသုံးပြုပေးပါက
ဖုန်နှင့်အညစ်ကြေးများကို ဖယ်ရှားရန်ကောင်းစွာ အထောက်ကူပြုသော နေ့စဉ်သုံး မျက်နှာသစ် ကရင်မ်ဖြစ်ပါသည်။ ချွေးပေါက်တွင်းရှိ ၀က်ခြံများဖြစ်ပေါ်စေသော ဘက် တီးရီးယားပိုးများကို ဖယ်ရှားပေးခြင်းဖြင့် ၀က်ခြံဖြစ်ခြင်းကို ထိရောက်စွာကာကွယ်နိုင် ပါသည်။ Vitamin C နှင့် Vita min E ပါဝင်သောကြောင့် အသားရေ စိုပြေချောမွေ့မှူကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါသည်။ ပုံမှန်အသားရေနှင့် အသားရေမညီသောသူများသုံးရန်အထူး သင့် လျော်ပါသည်။
ပါဝင်သောပစ္စည်းများ- Isopropylmethylphenol, Dipossium Glycyrrhizinate: vitamin C, Vitamin E
Lauric acid, Myristic acid, Palmitic acid,
အသုံးပြုပုံ- Acnes creamy wash ကိုလိုသလောက်ညှစ်ယူပြီး ဦးစွာအမြှုပ်ပြုလုပ်ပါ။ ရရှိသောအမြှုပ်ဖြင့် မျက်နှာပြင် ပေါ်သို့ညင်သာစွာနှိပ်နယ်ပွတ်လိမ်းပါ။ စက္ကန့် ၃၀ မှ တစ်မိနစ်ထိ နိပ်နယ်ပြီး ချောမွေ့သန့်စင်သော အသားရေရရှိရန် ရေများများနှင့်ဆေးကြောသန့်စင် ပါ။ တစ်နေ့လျှင်နှစ်ကြိမ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Acnes Pure White Wash မျက်နှာသစ်ဆပ်ပြာသည် အသားအရေကို ရေဓါတ်ဖြည့်ပေးပြီး စိုပြေစေပါသည်။ ၀က်ခြံဖြစ်ခြင်းကို လည်း ကာကွယ်ပေးပြီး အသားအရေဖြူစင်ဝင်းပစေပါသည်။ Acnes Pure White Wash တွင်ပါဝင်သော သဘာဝ အသီးအနှံများမှ ထုတ်လုပ်ထားသည့် AHAs သည် အရေပြားအပေါ်ယံလွှာရှိ ဆဲလ်သေများကို ပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ Yogurt extract (သဘာဒိန်ချဉ်)သည် အရေပြားအောက်ဆုံးလွှာအထိအားဖြည့်ပေးသည်။ အဆီပြန်ခြင်းကို ထိန်းပေးပြီး ၀က်ခြံဖြစ်စေသော ဗက်တီးရီးယားများကို သေစေပြီး အသားအရည်ညိုညစ်စေသော Melanin ဓါတ်များကိုဖယ်ရှားပေးပြီး အသားအရေဖြူဝင်းစေ သော ဗီတာမင်များစွာလည်း ပါဝင်ပါသည်။
Water , Sodium Laureth Sulfae, Glycerin , Sorbitol , Sodium Cocoyl Glycinate , Potassium Laureth Phosphate , Cocamidopropyl Betaine, Glycol Distearate , Sodium Chloride , PEG-200 Hydrogenated Glyceryl Palmate , Maltooligosyl Glucoside, Laureth-4 , Hydrogenated Starch Hydrolysate , PEG-7 Glyceryl Cocoate , Silica , Citric Acid , Sodium Lactate , Fragrance , Tocopheryl Acetate, Lactic Acid, Yogurt Filtrate , Isopropylmethylphenol , Butylene Glycol , Formic Acid , Propylene Glycol , Prunus Persica (Peach) Leaf Extract , Rubus Ideus (Raspberry) Fruit Extract , Pyrus Malus (Apple) Fruit Extract , Ascorbic Acid, Magnesium Ascorbyl Phosphate , Magnesium Chloride , Magnesium Nitrate , Methylisothizolinone , Methylchloroisothiazolinone.
လက်ဖ၀ါးထဲသို့ လုံလောက်စွာညှစ်ယူပြီး ဦးစွာအမြှုပ်လုပ်ပါ။ မျက်နှာပေါ်သို့စက်ဝိုင်းပုံ ညီညာစွာအသုံးပြုနှိပ်နှယ်ပါ ။ ပြီးလျှင် ရေများများဖြင့်ဆေးချပါ။
ဆီပြန် ခြင်းကိုလည်း သက်သာစေပါသည်။ အသားအရေကိုလည်း စိုပြေကြည်လင်စေသောကြောင့် နေစဉ်ပုံမှန်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
အစွမ်းထက်ပါဝင်ပစ္စည်းများက သင့်အသားအရေကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာ အကျိုးအာနိသင်များကိုပေးစွမ်းနိုင်ပါသည်။ ရေချိုပြီးချိန်တွင်
AHA:အဆီပြန်ခြင်းကို လျော့ကျစေပြီး ဝက်ခြံဖြစ်ခြင်းကိုကာကွယ်ပေးပါသည်။
Isopropylmethylphenol : ဝက်ခြံဖြစ်စေသော ဗက်တီရီးယားများကိုသေစေပြီး အရေပြားဆဲလ်အသစ်များကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။
Vitamin C & Vitamin E အရွယ်တင်နုပျိုစေသည်။ ချွေးပေါက်များကို ကျဉ်းစေပြီး အစိုဓါတ်ကို ထိန်းညှိပေးပါသည်။
Water, Glycerin, Sodium Cocoyl Glycinate, Laureth-6 Carboxylic Acid, Potassium Cocoyl Glycinate, Potassium
Cocoate, Acrylates Copolymer, Sodium Ascorbyl Phosphate, Tocopheryl Acetate, Niacinamide,
Isopropylmethylphenol, Glycyrrhetinic Acid, Lactic Acid, Sodium lactate, Sodium Chloride, PEG-40 Hydrogenated
Castor Oil, Potassium Hydroxide, Menthol, Disodium EDTA, Propylparaben, Fragrance, CI 19140, XI 42090
လုံလောက်သောပမာဏကို လက်ထဲထည့်ပြီးလျှင် ရေဖြင့်သေချာစွာပွတ်တိုက်အသုံးပြုပါ။ အစွမ်းထက်ပါဝင်ပစ္စည်းများကဝက်ခြံဖြစ်
၀က်ခြံကြောင့်အသားရေပျက်စီးသွားသော သူများသည် ပုံမှန်အသားအရေရှိသူများထက် ဘာ့ ကြောင့် ပို၍ရုစိုက်သင့်ပါလဲ?။၀က်ခြံသည် အရေပြားရှိဆဲလ်များကိုများစွာထိခိုက်ပျက်စီးစေပါ သည်။ ၀က်ခြံဖြစ်ပြီးပျက်စီးလျှက်ရှိသောအသားအရေသည် တင်းရင်းမှူမရှိခြင်း၊ ကြည်လင်မှု မရှိခြင်း၊ အမာရွတ်များဖြစ်ခြင်းနှင့်ကျန်ရှိနေတတ်ပါသည်။ Acnes Vitamin Cream သည် အ ရေပြား လျော့တွဲခြင်း၊ ကြမ်းတမ်း၍ မွဲခြောက်ခြင်းများကိုကောင်းစွာဖယ် ရှားပေးနိုင် စွမ်းရှိ သော Cream ဖြစ်ပါသည်။ ၀က်ခြံဖြစ်ပြီး ကြည်လင်မှုနှင့် တင်းရင်းလှပမှု ပြန် လည်မရရှိမှာ ကို စိုးရိမ်ပူပန်နေသူများအတွက် အထူးသင့်လျှော်သော Cream ဖြစ်ပါသည်။ ကျမ်းမာသော အသားရေကိုရရှိ ပိုင်ဆိုင်ရန် အတွက် အထူးလိုအပ်သော Vitamin E, Vitamin C, Vitamin B3, B5, B6 တို့ပါဝင်သောကြောင့် နူးညံ့စို ပြေ ကြည်လင် လှပပြီး ၀က်ခြံထပ်မဖြစ်ရန် အထူးကာကွယ်ပေးပါသည်။
ပါဝင်သောပစ္စည်းများ- Squalane, Glycerin, Cyclomethicone and Dimethiconecopolyol, Cetanol, Niacinamide (Vitamin B3), Ascorbyl Glucoside (Vitamin C), Tocopheryl acetate (Vitamin E), Aloe Barbadensis (Aloe) Leaf Extract, Panthenol (Vitamin B5), Pyridoxine Hydrochloride (Vitamin B6)…….
အသုံးပြုပုံ- မျက်နှာသန့်စင်ပြီးနောက် ခရင်မ်ကိုလုံလောက်သောပမာဏကိုယူ၍ မျက်နှာတစ်ပြင်လုံးလိမ်းပါ။ အထူးသဖြင့် ကြမ်းတမ်းပြီး ၀က်ခြံကြောင့်ပျက်စီးသောအသားအရေ နှင့် ညိုညစ်သော အသားအရေများပေါ်သို့လိမ်းပေးရပါမည်။ အရေ ပြားတွင်းသို့ စိမ့်ဝင်အောင်ညင်သာစွာနှိပ်နယ်ပေးရန်လိုပါသည်။ညအိပ်ယာမ၀င်မီနေု့စဉ်လိမ်းခြင်းဖြင့်ကောင်းသောအ ကျိုးကျေးဇူးများကိုခံစားရရှိစေမှာဖြစ်ပါသည်။
Sealing scar and dark spot treatment gel
Gel ပုံစံဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားသော Ascorbic Acid Glucoside သည် Vitamin C တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး Melanin နှင့် အမဲစက်များ ကိုကာကွယ်ပေးခြင်း၊ ဆဲလ်သစ်များကိုတိုးပွားစေခြင်း နှင့် အမာရွတ်များကိုပျောက်ကင်းစေပါသည်။ အရေပြားတွင်းသို့ စိမ့် ၀င်မှုအားကောင်းပြီး ကပ်စေးခြင်းမရှိသောကြောင့် Acnes scar care လိမ်းပြီးကြိုက်နှစ်သက်ရာမိတ်ကပ်ကိုထပ်လိမ်း နိုင် ပါသည်။ Allantoin, Vitamin E, Vitamin B6 တို့ပါဝင်သောကြောင့် ဆဲလ်သစ်များကိုလျင်မြန်စွာမွေးဖွားခြင်းဖြင့် ပျက် စီး သွား သောအသားရေများကို ပြန်လည်ပြုပြင်ပေးပါသည်။ ၀က်ခြံကြောင့် ဖြစ်သောအမာရွတ်များကိုလည်းထိရောက်စွာ ပျောက်ကင်းစေပါသည်။
အကျိုးကျေးဇူး- melanin, အမဲစက်များ၊ အမာရွတ်များ ပျောက်ကင်းစေပြီ်းဆဲလ်သစ်များကိုတိုးပွားအောင်လှုံ့ဆော်ပေး ပါသည်။
ပါဝင်သောပစ္စည်းများ- Water, Alcohol, Glycerin, PEG-40, Hydrogenated Castor Oil, Ascorbyl Glucoside, Triethanolamine, Carbomer, Tocopheryl Acetate, Propylene Glycol Alginate, BHT
အသုံးပြုပုံ- လုံလောက်သောပမာဏကိုယူ၍ လက်ချောင်းလေးများဖြင့် Gel ကိုဝက်ခြံအမာရွတ်ရှိသော နေရာပေါ်သို့ ပါးပါး သုတ်လိမ်းပေးပါ။ Treatment ယူနေစဉ် အပြင်သွားပါက Mask ကိုသေချာစွာဖုံးအုပ်ပြီးသွား ခြင်းဖြင့် အမာရွတ် နှင့် အမဲ စက်ကိုပိုမိုထိရောက်စွာ ကာကွယ်နိုင်ပါသည်။
Propionibacteria များကြောင့်ဝက်ခြံများ မြုံပြီး ယောင်ကိုင်း ကြီးထွားလာခြင်းကို ကာကွယ်ပေးသည်။ အဆီမ ပါ ခြင်း၊ အရေပြားတွင်းသို့လျင်မြန်စွာ စိမ့်ဝင်နိုင်မှုအားကောင်းခြင်း၊ အရောင်မပါ Gel ပုံစံဖြင့် ပြုလုပ် ထားခြင်း ကြောင့် စေးကပ်ခြင်းမရှိပဲ သုံးစွဲရလွယ်ကူအဆင်ပြေစေသည်။ Vitamin B6၊ Vitamin E တို့ပါဝင်သောကြောင့် ၀က်ခြံမဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပြီး၊ ယောင်ယမ်းခြင်းကိုလျော့ချပေးပါသည်။
ပါဝင်သောပစ္စည်းများ- Resorcin: 0.4%, Sulfur 2.5%, Stearyl Glycrrhetinate 0.1%, Vitamin E, B6.
အသုံးပြုပုံ- မျက်နှာကိုသေချာစွာသန့်စင်ပါ။ Acnes sealing gel ကိုလုံလောက်သောပမာဏခန့်ယူပြီး ၀က်ခြံ ဖုလေးများပေါ်သို့ တို့ပြီးလိမ်းပေးရပါမည်။ တစ်နေ့လျှင်နှစ်ကြိမ်မှသုံးကြိမ်ထိအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Acnes Silky Make up Base
တာရှည်ခံသောဓါတုဆေးဝါးများမပါခြင်း၊ Alcohol ပါဝင်မှုမရှိခြင်း၊ အဆီပါဝင်မှုမရှိခြင်း၊ သဘာဝ အသားရောင် တိုင်း ဖော် စပ်ထားခြင်းတို့ကြောင့် သဘာဝတိုင်း လှပလိုသူများတွက်အထူး သင့် လျှော်ပါသည်။ Sensitive skin ရှိ သူများယုံကြည် စိတ်ချ စွာ သုံးစွဲနိုင်ပါသည်။ Isopropylmethyl phenol ပါဝင်သောကြောင့် ၀က်ခြံဖြစ်စေသောဘက်တီးရီးယားပိုးများပွားများခြင်းကိုကာကွယ် ပေး ပါသည်။ Vitamin E, Vitamin B6, Vitamin C တို့ပါဝင်သောကြောင့် ကြမ်းတမ်းညိုညစ်သော အသားရေများကို ပြန်လည် နူးညံ့ စိုပြေလာ စေပါသည်။ SPF 20 နှင့် PA++ တို့ပါဝင်သောကြောင့် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကြောင့်အသားရေပျက်စီး ခြင်းအန္တရာယ် ကိုလည်းကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။
ရရှိနိုင်သောအကျိုးကျေးဇူးများ- Silky Make up base သည် Sensitive skin နှင့် အရေပြားယားယံသူများအတွက်အသုံး ပြုရန် အထူး သင့် လျော်ပါသည်။ ၀က်ခြံကိုအထူးကာကွယ်ပေးသော ပါဝင်ပစ္စည်းများပါဝင်ခြင်း၊ အသားရြေ ကမ်း တမ်း ခြောက်သွေ့ခြင်းများအတွက် Vitamin များပါဝင်သောကြောင့် သုံးစွဲပြီးလျင်ချောမွေ့ လှပကြည်လင်မှုကိုရရှိစေပါသည်။
Vitamin E, Vitamin B6, Vitamin C, Isopropylmethylphenol, Stearyl Glycyrrhetinate, Zinc Oxide, Titanium Dioxide, Rosemary Extract,…
အသုံးပြုပုံ- အသုံးမပြုမီ ဘူးကိုသေချာစွာ shake လုပ်ပါ။
အဆီပြန်သောအသားရေများအတွက်အထူး သင့်လျော်ပါသည်။ T zone area တွင် အဆီပြန် သူများအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။အရေပြားပေါ်မှ အဆီများကို ကောင်းမွန်စွာ ဖယ် ရှားပေး နိုင်သောကြောင့် တစ်နေကုန်သန့်ရှင်း မှုကိုခံ စားရစေပါသည်။ မိတ်ကပ်မလိမ်းမီနှင့် မိတ်ကပ် လိမ်းပြီးတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ Acnes oil remover sheets တွင်ပါဝင်သော နူးညံ့သည့် ပေါင် ဒါမှုန့်လေးများကြောင့် အသုံးပြုရာတွင် မိတ်ကပ်ကွက်ခြင်းမရှိပဲ ညီညာဝင်းမွတ်မှုကိုရရှိစေပါ သည်။ အသားရေမရွေး အသက်ရွယ်မရွေးအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Find Ances Products on